Okungafundwa kwabaseChina njengoba iCoronavirus isabalala - Bayede News
Iqiniso lithi okuqondene naboHlanga kusanyanyalatwa
AbeKhomishini Yokhetho bahlaba ikhwelo lokungenela ukhetho loHulumeni Bendawo
Usabela abatshali zimali umholi weFreedom Front Plus
Amakhulu ayayifulathela iLibya
Kungahle kubalungele abalimi bakamoba abasafufusa
Indaba inevoti lamaNdiya: Ngabe nakulokhu aboHlanga bazoza muva?
Iphinde yanya yazininda iDA kutshikiza uhlanga
Isikhongeli sokhetho: INdlovu ithi abantu abayethembe
I-ActionSA isithembe iNkantolo Yezokhetho
Liyobe lisombuluka mhla uvota
Isinqumo Ngokhetho: Ngabe lona ngunoxhaka noma ukwenzangakhona
Bathembisa lukhulu omakoti kwezepolitiki
Ukungqubuzana koMthethosisekelo noMthetho Wesintu kolweSihlalo
Imibuzo ngengqungquthela yeFrance ne-Afrika
Kungani abantu bengasasiselani ake sizejwayeze ukuphana
UMengameli emizamweni yokuletha ukuthula nozinzo eTunisia
Kuqubuka uvoyizana ogqokweni kolwaseSudan
Akusekude iMali yenze isivumelwano neRussia ngolwamasosha
Amehlo omhlaba okhethweni lwaseLibya ngoZibandlela
Inhlangano yomhlaba yezempilo ikhathazekile ngesimo sase-Afghanistan
IKenya inike amalungu omphakathi wamaShona ubuzwe, nokuqede umzabalazo weminyaka
Kusolwa owayengumehluleli ekubulaweni kukamengameli
IHaiti iqoke uNdunankulu omusha ngemuva kokubulawa kukaMengameli
by nguZanele Buthelezi
UZanele yintatheli esimkatshubovu nezinze eChina.
Izinga lokutheleleka kwabantu ngegciwane iCoronavirus libonakala lehla eChina, la elaqubuka khona ngoZibandlela odlule, nosekunika ithemba lokuthi lizogcina linqotshiwe. Kodwa osekukhathaza kakhulu ukuthi lesi sifo sesisabalala ngesivinini kwamanye amazwe omhlaba. Ngokwezibalo zakamumva, angaphezulu kwekhulu amazwe asebike abantu abaneCOVID-19. Zonke izifunda emhlabeni sezithintekile ngisho nezwekazi i-Afrika. Ayishumi amazwe ase-Afrika asebike iCoronavirus, i-Algeria, iBurkina Faso, iCameroon, i-Egypt, iMorocco, iNigeria, iSenegal, iSouth Afrika, iTogo neTunisia. I-Egypt iyona eshayeke kakhulu njengoba ibika abantu abalinganiselwa ema-60 abaneCoronavirus, ilandelwe i-Algeria ngesibalo esikhulu. INingizimu Afrika isathole abantu abayishumi nantathu.
Iningi labantu abatholwe nalesi sifo e-Afrika kubikwa ukuthi asebeke bavakashela emazweni athintekile e-Europe njenge i-Italy nayo eshayeke kakhulu. Kuyimanje kuvalwe thaqa yonke into e-Italy kuzanywa ukunqanda ukubhebhetheka kwaso isifo esesithelele abantu abangaphezulu kwezi-10 000 labulala abangaphezulu kwama-600 kuleliya lizwe. Abantu base-Italy bathobele umyalelo kaHulumeni wokuthi bonke abantu bahlale emakhaya njengoba kwandiswa imizamo yokulwa nalesi sifo. Balinganiselwa ezigidini ezingama-60,55 abantu base-Italy abahleli emakhaya ngenxa yalesi sinqumo. Imigwaqo ithuli ithe cwaka kanti nemidlalo yebhola imisiwe.
Kuzokhumbuleka ukuthi lesi sibalo sabantu siyalingana naleso sabathinteka ezinyangeni ezimbili ezedlule esifundazweni iHubei enkabeni yaseChina khathi kuvalwa amadolobha okubalwa neWuhan la okwaqubuka khona lolu bhubhane. Kuyimanje kumi nse ukunyakaza ezindaweni ezivame ukuphithizela e-Italy, kanti ezinkundleni zokuxhumana kusabalele i#IStayHome ukukhuthaza abantu ukuthi bahlale ezindlini ukuzivikela kuCoronavirus. Abanye bayigxeka iChina khathi ithatha lesi sinyathelo, kodwa manje abekho labo bagxeki njengoba i-Italy yenza okufanayo. Kuyimanje iWorld Health Organization isincome iphindelela izinyathelo ezithathwe iChina okubalwa nokuyalela abantu ukuthi bahlale ezindlini kulawo madolobha athinteke kakhulu. Indlela amazwe asexhumene ngayo yenza kube nzima ukuthi kube nezwe elizokwazi ukuxebuka kwamanye ukuze linqande ukusabalala kwesifo.
Ingakho kubalulekile ukuthi amazwe abe nezinhlelo eziqinile zokuhlola abantu kanye nokugwema ukusabalala kwalo igciwane. Zimbalwa izinto ezicacile kulesi sikhathi salolu bhubhane ukuthi izibhedlela ezizimele azikwazi ukubhekana nalesi sifo. Indlela iChina ebhekane ngayo nalesi sifo ngokuhlanganisa zonke izinsiza zezempilo zikaHulumeni ngokushesha okubalwa nezibhedlela kwenze kwakhanya ukubaluleka kohlelo lwezempilo olungaphansi kukaHulumeni. Lokhu ngeke kubelula ukuthi kwenzeke emazweni afana ne-USA ne- Italy lapho uhlelo lwezempilo oluphansi kukaHulumeni lungekho khona. Lokhu sekwenze abanye kula mazwe babe nokungabaza ukuthi bazokwazi yini ukumelana nokunqanda ukubhebhetheka kweCoronavirus.
E-USA, lesi sifo sesiqinise umkhankaso walabo abafuna uhlelo lwezempilo luvuleleke kuwo wonke umuntu abalubiza ngeMedicare For All, ukuze nalabo abahlwempu bakwazi ukuthola usizo lwezempilo ngale kokwesabela ukukhokhiswa izindodla zemali. Njengamanje, kunokwesabela ukuthi kunabantu e-USA abangeke baye kothola usizo lwezempilo uma besola ukuthi kungenzeka banayo i-Coronavirus ngoba besabela ukusala nesikweletu esesabekayo. Kanti lokhu kuzobeka inqwaba yabantu engozini. Kanti omunye umbuzo uthi abantu bazohlala kanjani emakhaya uma bezoxoshwa emsebenzini uma belova? Kula mazwe alukho uhlelo lwezenhlalakahle ukubhekelela labo bantu ababhekene nezikhathi ezinzima. I-China ikwazile ukubeka phambili ukuphepha kwabantu kune nzuzo kwezomnotho khathi ithatha izinyathelo zokuvala amadolobha nezindawo ezithintwe isifo iCoronavirus.
Noma ngabe igxekwa kanjani iChina kodwa indlela eluphathe ngayo udaba lokulwa neCoronavirus isibe isibonelo. Kuyimanje seziyehla izibalo zokusabalala kwegciwane ngesikhathi likhuphuka ngokushesha kwamanye amazwe. Njengoba amazwe omhlaba ezama ukulwa nalolu bhubhane kuyokuwasiza ukuthi abheke eChina afunde izifundo khona. INingizimu Afrika inohlelo oluxubile lwezempilo njengoba kunezibhedlela zikaHulumeni kanye nalezo ezizimele. Yize izinsiza ziyinselelo, kodwa uHulumeni usengakwazi ukusebenzisa izingqalasizinda zezempilo ukusiza abantu kulesi sikhathi salolu bhubhane. Okubalulekile njengamanje ukuthi kunqandwe ukuthi lesi sifo singabhebhetheki kakhulu ngoba uma singenza njalo kungasho inkinga ezibhedlela.
IChina ikwazile ukuguqula ezinye zezindawo zikaHulumeni zaba izibhedlela zesikhashana zokwamukela abantu abaneCoronavirus. Lesi esinye sezibonelo ezinhle, kodwa akubonakali iNingizimu Afrika ingakwazi ukukwenza lokhu. Izinga lokusebenzisana komphakathi noHulumeni ezikhathini ezibalulekile njengesimo esiphuthumayo sezempilo liphezulu eChina. Kulula ukuhlanganisa abantu basebenze ndawonye besebenzela isizwe. Yilo muzwa owenze ukuthi uHulumeni akwazi ukuyalela abantu ukuthi bahlale emakhaya balalela, ngoba iningi likuqonda ukubaluleka kokuphepha. Kanti kuthe sekubonakala ingozi emnothweni wezwe abantu baphinde balalela sekuthiwa ababuyele emsebenzini.
INingizimu Afrika ayinazo izingqalasizinda ezifana nezeChina kodwa ukubambisana phakathi kukaHulumeni nabantu bakuleli kungasiza kakhulu. Kubalulekile ukuthi uHulumeni waseNingizimu Afrika akhiphe ulwazi olufanele nolwanele ngalesi sikhathi ukunqanda ukutatazela kubantu. Ungakhohlwa ukugeza izandla ngensipho namanzi ngaso sonke isikhathi, sitha umlomo ngendololwane uma ukhwehlela noma uthimula uphinde ugweme izindawo ezigcwele abantu. Iya kothola usizo lwezempilo uma ukhwehlela, unomphimbo owomile, kubuhlungu isifuba, unemfiva, phakathi kwezinye izinto. Tholwa ulwazi ngeCoronavirus ezindaweni ezithembekile.
nguZanele Buthelezi Mar 13, 2020
Lingahle life ngathi: Ingozi yokuqedwa kwezihlalo zabeNguni naboHlanga jikelele
Akusakazwe ngolimi oluqondile nokuyilo olufanelekile
Kungenzeka ukuthi iNkantolo YoMthethosisekelo isiginqelwe kwelikaZuma